Ogaden News Agency (ONA) – Dayuurad Soomaaliya Ka Duushay oo Kenya Ku dhacday.
Dayuurad Soomaaliya Ka Duushay oo Kenya Ku dhacday.
Posted by ONA Admin	/ November 29, 2016
Sida laga soo xigtay Masuuliyiinta garoonka diyaaradaha ee Joomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in fiidnimaddii Axadda si ku meel gaadh ah u xidheen wadada dayuuraduhu ay ku ordain (ku cararaan) ee garoonkaas, kadib markii dayuurad ka duushay dalka Soomaaliya ay ku dhacday halkaas.
Warkan oo ahaa qoraal ka soo baxay hey’adda maamusha Garoomada Kenya ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano KAA ayaa lagu sheegay in shilkaasi uu saameeyay dayuuradihii halkaas ka duuli lahaa ama ka soo degi lahaa.
Waxaa lagu sheegay warbixintan kasoo baxday KAA in dayuuradihii ka soo degi lahaa garoonka dhamaantood loo weeciyay magaalada Mombasa. Masuuliyiintu waxey sheegeen in shilkaasi uusan wax khasaare ah geysan.
Garoonka Joomo Kenyatta ayaa kamid ah garoomada ugu mashquulka Badan Qaaradda Africa. Weli kenya ma aysan shaacin shirkadda laheyd dayuuraddan qalibantay iyo macluumaad ku saabsan rakaabkii saaraa diyaarada midna.